अविश्वसनीय – मझेरी डट कम
ऊ एउटा निकै ठूलो बैंकमा काम गर्दथ्यो । उसको काम थियो, बैंकमा जम्मा गर्न ल्याएका पैसाको हिसाब किताब राख्नु । उसले बैंकमा काम गर्न थालेको पनि धेरै वर्ष बितिसकेको थियो । उसले अवकाश पाउने समय पनि नजिकै आइसकेको थियो ।
एक दिनको कुरो हो, बैंकमा खास काम थिएन । ग्राहकहरू पनि खासै थिएनन् । खुट्टा पसारेर आरामसँग कुर्सीमा बसिरहेको थियो । भनिन्छ खाली दिमाग शैतानको घर । दिमागमा के के कुरा घुस्छ, घुस्छ । कुर्सीमा बस्दा बस्दै उसले आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच्न थाल्यो, मैले यस बैंकमा २५ वर्ष बिताएँ । यी २५ वर्षमा अरबौंंं रूपियाँ मेरो हातमा आए, गए । मैले के पाएँ ? २५ वर्ष पहिले म जति गरिब थिए अहिले पनि त्यति नै गरिब छु । बालबच्चा र घरको बोझ भने पहिलेभन्दा निकै गह्रौं भएको छ ।
उसले झ्वाट्ट सम्झिहाल्यो, २५-२५ वर्षसम्म काम गरिसक्दा पनि आफ्नो घर बनाउन पुग्ने पैसाको जोहो त गर्नै सकिएन । आखिर किन ?
‘आखिर किन ?’ जवाफ पनि उसले पाइहाल्यो । उसले इमान्दारीसाथ काम गर्दै आएको थियो । ती सब कुरा सोच्दा सोच्दै ऊ निर्णयमा पुग्यो, अब धनी बनेरै छाड्नेछ ।
अर्को दिन एउटा निश्चयसाथ ऊ बैंक पुग्यो । उसले बैंकबाट १० लाख रूपियाँ गायब गर्‍यो । त्यति गरेर पनि उसले अरू अपराधीले जस्तो भाग्ने कोसिस चाहिँ गरेन । फलस्वरूप प्रहरीलाई उसलाई छिट्टै आफ्नो फन्दामा लिइहाल्यो । उसको विरुद्ध मुद्दा चल्यो । अदालतद्वारा १० वर्ष जेल सजायको निर्णय सुनाइयो ।
दश वर्ष ! १० वर्षको जेल सजाय उसले आरामसँग बितायो । सजाय पूरा भएपछि ऊ घर फर्क्यो । प्रहरी निरीक्षक पहिल्यै घरमा पुगिसकेको थियो । उसलाई अचम्म लागेन । तैपनि उसले सोध्यो, “तपाईं यहाँ कसरी ?”
“तपाईंकै प्रतीक्षामा । ठीक छ, १० लाख रुपियाँ गडबड गरेबापत तपाईंले १० वर्षको सजाय पूरा गरिसक्नु भएको छ तर बैंकले अझसम्म त्यो पैसा पाएको छैन ।”
“पाउनु हुनेछ, पाउनु हुनेछ, तपाईं मलाई दुई घण्टाको समय दिनुस्,” उसले प्रहरी निरीक्षकलाई आश्वस्त तुल्याउँदै आरामसँग भन्यो ।
पच्चीस वर्षको नियमित जागिर । त्यसपछि १० वर्ष जेल सजाय । ऊ बूढो भइसकेको थियो । १० वर्षको जेल सजाय भुक्तान गर्दा उसले अत्यन्त इमान्दारीपूर्वक गर्‍यो । जेल सजायको क्रममा उसले राम्रो इज्जत कमाएको थियो । बूढोमाथि विश्वास गर्न सकिन्थ्यो । उसलाई दुई घण्टाको समय दिइयो तर जासुस पछाडि लगाउन भने पुलिसले बिर्सेन ।
निर्धारित अवधि दुई घण्टा बित्यो । बूढो १० लाख रूपियाँसहित प्रहरी चौकीमा प्रहरी निरीक्षक सामु उपस्थित भयो । उसले प्रहरी निरीक्षकलाई पैसा सुम्प्यो र फर्कन तरखर गर्‍यो ।
“एउटा कुरा हामीले बुझेनौं,” प्रहरी निरीक्षकले भन्यो- “पैसा फर्काउनु नै थियो भने फेरि गडबडी नै किन गर्न पर्‍यो ?”
“त्यो यसकारण इन्स्पेक्टर साहेब,” बूढोलाई पछ्याउन पठाइएको जासुस, जो बूढोसँगै आइपुगेको थियो, ले भन्यो- “किनभने यससँग सम्पत्ति थिएन … । १० लाख रुपियाँ पाउनासाथ यसले विभिन्न बैंकमा जम्मा गर्‍यो । अहिलेसम्ममा त्यसबाट ब्याजका रूपमा यति पैसा जम्मा भइसकेको छ, यसको परिवारले अब बाँकी जिन्दगी आरामसँग गुजार्न सक्छ । अन्यथा यसले दुःखका साथ जिन्दगी गुजार्नुपर्थ्यो ।”
“अविश्वसनीय ! अचम्मको !!” प्रहरी निरीक्षक चकित थियो ।
1 thought on “अविश्वसनीय”
एकदेव August 23, 2014 at 1:45 am
कथानुवाद राम्रो लाग्यो।
कथानुवाद राम्रो लाग्यो। अन्त्य पनि मार्मिक छ।
साथै यो कथानुवाद कसले गर्नुभएको हो अनि कुन भाषाबाट अनुवाद गरिएको हो त्यो जानकारी पाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो कि।
हुन त धेरै अगाडि पोष्ट भएको कथा रहेछ तै पनि सम्पादक ज्यु तथा अन्य पाठकहरूबाट त्यस कुराको जानकारी पाउन पाए राम्रो।